Ọ bụ ọrụ ugbu a. Pebble kwuru ndị ahịa ya na Twitter | Akụkọ akụrụngwa
Ọ bụ ọrụ ugbu a. Pebble kwuru ndị ahịa na Twitter
Izu a gara aga ka ekwuputara ịzụta Pebble site na Fitbit na onye otu anyị Ignacio Sala kwupụtara ya na nke a otu isiokwu. Taa mgbe ihe dị ka ụbọchị 6 site na mbata nke akụkọ a na netwọkụ, Pebble mere ya ka ọ bụrụ onye ọrụ na ndị ọrụ họọrọ Oge 2 hapụrụ na-enweghị elekere. Erere smartwatch emetụtala nke ọma site na ire nke ika a na ndị ọrụ ahụ niile mere nzụta ahụ ga-echere rue Machị na-esote afọ iji nwetaghachi ego ahụ. N'ọnọdụ ọ bụla onye ọ bụla ga-eweghachite ya, mana ọ bụ ọrụ.
Nke a bụ ukara tweet nke ebido site na akaụntụ Pebble gọọmentị n'ehihie a, ihe ekwenyelarị mana adighi ebipụta ya:
Anyị @kickstarter ndị na-akwado azụ ga-akwụghachi na-akpaghị aka maka ụgwọ ọrụ ọ bụla emezughị site na Machị 2017. #ihaegwuhttps://t.co/SMau6NhCEl pic.twitter.com/GFvMnT0dIv
- Obere okwute (@Pebble) December 7 nke 2016
Ugbu a, a ga-ekpebi ọdịnihu nke ụlọ ọrụ ahụ ma ndị niile nwere elekere nke ika ahụ ga-edo anya na nkwa nke ngwaọrụ ha apụtachabeghị nke ọma na ọgbakọ ahụ ga-abụ naanị saịtị ga-anọgide na-arụ ọrụ maka ajụjụ ha. I nwere ike iche na ụlọ ọrụ na-azụta Pebble ga-elekọta nsogbu niile nwere ike ịda nye ndị ahịa ndị taa nwere smartwatch nke ika ahụ, mana nke a bụ ihe na-akwadobeghị ebe ọ bụla. Enwere ike mgbe nkwupụta ọkwa Pebble banyere ọrụ anyị ga-enwe Fitbit, yabụ na olile anya na nke a ga-eme ka enwere obi abụọ banyere nsogbu ndị a metụtara ndị ahịa Pebble ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Ọ bụ ọrụ ugbu a. Pebble kwuru ndị ahịa na Twitter
Gbanyụọ onwe gị (@DisruptItYrslf) dijo
Ha aghọtabeghị na ọnwa Mach pụtara na a ga-enyeghachi onye ọ bụla ụgwọ tupu ọnwa agwụ. Ọ pụtaghị na a ga-akwụghachi ha niile n’ọnwa ahụ. Na m na-ahụ ọtụtụ, abịarutewo m ha.
Zaghachi iji gbazee ya (@DisruptItYrslf)
Nke a bụ otu esi gosipụta akara ngosi mbụ nke Qualcomm Snapdragon 835
Ihe ohuru Samsung Galaxy A5 (2017) di nso na akuku